कोभिड नेपाल: सङ्क्रमणको महामारीमा प्रदेश १ मा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव – हाम्रो देश
प्रदेश १ मा कोभिड-१९ सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गर्दा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव पनि बढ्दै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दिनप्रतिदिन जटिल प्रकारका बिरामीहरू थपिँदै जाँदा अस्पतालमा शय्याहरू पनि थपिने तर जनशक्ति नथपिँदा उपचारका लागि धौ-धौ पर्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
प्रदेश १ मा विराटनगरस्थित कोशी कोभिड-१९ उपचार केन्द्र, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र झापाको मेची अस्पतालसहित केही निजी अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आएको छ।
शय्या र अक्सिजन नपाएर अन्य प्रदेशका सङ्क्रमितहरू पनि प्रदेश १ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने गरिएको बताइएको छ।
बिरामीको बढ्दो चाप
विराटनगरस्थित कोशी कोभिड-१९ उपचार केन्द्रका डा. दीपक सिग्देलले अस्पतालमा जटिल प्रकारका सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा सीमित जनशक्तिले उपचार गर्न धौ-धौ परिरहेको बताए।
उनले बीबीसीसँग भने, “सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप थेग्न सकिने अवस्था छैन।”
“अस्पतालमा बिरामी र शय्या चाहिँ थपिरहने तर जनशक्ति चाहिँ नथप्दा निकै गाह्रो भएको छ। पीपीई लगाएर चौबिसै घण्टा खट्न सकिँदैन।”
उपचारमा खटिने कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भएका कारण सीमित जनशक्तिले काम चलाइरहनु परेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
आफूहरूले अस्पताल प्रशासनलाई जनशक्ति थप गर्न पटक-पटक भने पनि कुनै सुनुवाइ नभएको डा. सिग्देल बताउँछन्।
शय्या र अक्सिजन अभाव देखिएको छैन
मेची अस्पताल झापाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुँदा जटिल प्रकृतिका संक्रमतिहरुलाइ अन्यत्र पठाउने गरिएको बताए ।
उनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई जनशक्ति थप गर्न र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।
सरकारी अस्पतालमा मात्र होइन सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दा आफूहरूले पनि जनशक्तिको अभाव झेलिरहनुपरेको बताएका छन्।
अन्य प्रदेशमा अक्सिजन र शय्याको चरम अभाव देखिए पनि प्रदेश १ मा हालसम्म त्यस्तो अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
यस्तो छ प्रदेश १ को तथ्याङ्क
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा शुक्रवारसम्म ४२ हजार छ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।
तीमध्ये ३० हजार ७ सय सङ्क्रमणमुक्त भैसकेका छन्।
हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११ हजारभन्दा बढी छ। तीमध्ये करिब पाँच सय सङ्क्रमित विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाररत छन्।
प्रदेश १ मा कोभिड १९ का कारणबाट शुक्रवारसम्म ६२७ जनाको मृत्यु भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रोत्साहन नभएको गुनासो
ज्यानको जोखिम मोलेर अहोरात्र सङ्क्रमितको उपचारमा खटिए पनि सरकारी तहबाट कुनै प्रोत्साहन नभएको चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ।
सरकारले दिने भनिएको जोखिम भत्ता, बिमा, उपचार सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लगायत प्रोत्साहनका कुरा पनि समयै उपलब्ध नहुँदा काम गर्ने वातावरण पनि नभएको कतिपयको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू भने मुलुक नै कोभिडको चपेटामा परेकाले भइरहेको स्रोत र साधनले काम चलाउनु परिरहेको बताउँछन्।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार र जनशक्ति थप्ने विषयमा पहल भइरहेको बताउँछिन्।
त्यसका लागि नयाँ र सेवानिवृत्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ करारमा नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी रहको उनले बताइन्।
जोखिम मोलेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको बिमा गर्ने, जोखिम भत्ता लगायतका सुविधा दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ।
विवाह भएको दुई दिनपछि बेहुला-बेहुलीमा कोरोना संक्रमण
पूर्णरुपमा सञ‍्चालनमा आयो कोरोना अस्पताल, एकैपटक २ सयजनाको उपचार गर्न…
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि आकाशे पुलको शिलान्यास रोकियो